Published June 10, 2020 at 10:17 PM CDT
Reynolds wuxuu sheegaa inuu virusku hoos ugu sii dhacayo gobolka isla markaana tijaabooyinku ay sii kordhayaan. Mid ka mid ah 16 Iowans ayaa la tijaabiyay. Heerka ayaa ka sarreeya Gobolka Woodbury sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka deegaanka.
Saraakiisha ugu sareysa caafimaadka Iowa wali waxay ku dhiiragelinayaan qofkasta oo ka weyn 65 ama leh halista caafimaad inuu guriga joogo. Haddii aad xannuunsato ama aad cudurka qaadday. Waa inaad karantiil ku siisaa 14 maalmood.
Magaalada Iowa waxaa ka dhacay in kabadan 22,600 xaaladood oo togan oo ah COVID-19 iyo 631 oo loo dhintey sida lagu sheegay macluumaadka websaydhka coronavirus ee gobolka saacadu markay ahayd 4 p.m .. Gobolka Woodbury wuxuu soo sheegay ku dhawaad 3,000 kiis iyo 38 dhimasho. Waxaa degmada Dakota laga dilay 30 qof.
Markii ugu horreysay ilaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka, ma jiri doono Bandhig Gobolka Iowa sababtoo ah walaacyada la xiriira cudurka faafa ee COVID-19. Wadahadallo bilo socday kadib, guddiga cadaaladda ee gobolka ayaa codbixintii ugu dambeysay galabta qabtay.
Waaxda Iowa ee Kheyraadka Dabiiciga ah waxay ku boorineysaa qof walba oo jooga marinnada biyaha ama xeebaha dowliga ah inay taxadar muujiyaan.
Tani waxay timid kadib seddex maalmood oo dhimatay intii u dhaxeysay Sabtida iyo Isniinta. Saraakiisha xafidaada ee 'DNR' ayaa ka jawaabey harraad ka dhacay Iowa oo sababay dhimashada shan. Tan waxaa ku jira laba gudaha Siouxland; mid ka mid harada Brown ee u dhow Salix iyo tan kale ee Kellen's Ponderosa oo ka baxsan Le Mars.
Warbixinno horudhac ah ayaa muujinaya in badan oo dhibbanayaashu aan xirnayn jaakadaha nolosha.
Iyada oo barkado badan oo magaalada ah la xidho xagaaga, DNR waxay leedahay dadku waxay ku qulqulayaan xeebaha dadweynaha si ay u qaboobaan. Dheeraad ah, wabiyaal iyo harooyin. Waxay kaloo dadka xusuusinayaan inay ka fogaadaan masaafadooda jireed iyo kuwa kale oo aysan ku urursan koox ka weyne 10.
Crews waxay ka shaqeyneysaa inay dayactirato labo biyo-galeenka ah ee magaalada Sioux City.
Mid ka mid ah wuxuu ka dhacay isgoyska 7-aad iyo Water Street kan kale ee ku yaal Pierce Street meel u dhow tiyaatarka Orpheum.
Waxaa jira warbixino ku saabsan biyaha hoose ee dabaqa hoose ee magaalada Orpheum iyo maktabada dadweynaha.
Mudaharaadayaasha Madoow ee Madoow ee Muhiimka u ah Mudaharaadayaasha ayaa ku sugnaa guriga dowlada si ay u muujiyaan dalabkooda dowlada gobolka.
Waxay rabaan inay sharci-dajiyayaashu meel mariyaan dib-u-habeeynta booliiska, ay go'aan ka gaaraan xashiishadda, una joojiyaan xabsiyada carruurta.
Sharci-dajiyayaashu waxay ka wada xaajoodeen qorshe dib-u-habeyn booliis laakiin kama aysan codeynin.
Local NewsLocalIowaOrpheumWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaDes MoinesIowa Governor Kim ReynoldsnewsCOVID-19SomaliBlack Lives Matter